Umphathi weVibes Wallet: I-Cross-Platform Mobile Wallet | Martech Zone
Umphathi weVibes Wallet: I-Cross-Platform Mobile Wallet
NgoMsombuluko, Septemba 23, 2013 NgeSonto, Septhemba 22, 2013 Douglas Karr
UVibes ukhiphile Umphathi we-Wallet, isixazululo semali yesikhwama esinqamulelayo, njengengxenye yesikhulumi sabo sokumaketha seselula seCatapult. Impumelelo yokumaketha kweselula incike ekwenzeni ngezifiso nokuqukethwe okunamandla. Imiphumela iyathuthuka lapho ukunikezwa kuhambisana kakhulu nokwenziwa ngumsebenzisi, ukuthi ukwenzani nokuthi ukuphi. Kokubili ama-API we-Passbook ne-Google Wallet Object ahlanganiswe ku-Wallet Manager.
Ngokusho the Umphathi we-Wallet ikhasi lomkhiqizo:
Dala - Sebenzisa amathuluzi we-Wallet Manager ukudala okuqukethwe kwakho kwe-wallet yeselula ngemizuzu. Kulula njengokukhetha ithempulethi elifanele lomkhankaso wakho bese usebenzisa amathuluzi ethu wokuhlela ukukhetha imibala, ukulayisha izithombe zakho nokufaka uphawu lomkhiqizo, uthayiphe izinkambu zombhalo nokuningi. Akukho ukufaka amakhodi, akukho ukudideka kanye neminikelo yakho yesikhwama seselula ephiliswa khona manjalo.
Sabalalisa - Isiphathi se-Wallet sisebenzisa ubuchwepheshe be-Catapult SmartLink-detection technology, obukuvumela ukuthi uthumele iminikelo yakho yesikhwama seselula kunoma iyiphi ipulatifomu - ukuletha ama-Passes kuma-iPhones, i-Google Wallet Objects kumafoni we-Android, nokuqukethwe kweWebhu kwamaselula kwamanye amadivayisi.
Lawula - Uma amakhasimende akho eseyigcinile iminikelo yakho yesikhwama ephathekayo kumafoni abo, ungasebenzisa i-Wallet Manager ukuvuselela ngamandla okunikezwayo nezinhlelo zokwethembeka. Thepha ekusebenzeni kokuxhumana okufana nokucindezela kwezikhwama zamaselula ukuze uthumele izikhumbuzo zamakhasimende akho, ukubuyisela emuva labo abangazisebenzisanga izitifiketi zabo zokwethembeka nokushintsha noma ukubuyekeza okunikezwayo ukukhombisa ukutholakala komkhiqizo.
Lungiselela - Sebenzisa idatha futhi analytics, ingxenye futhi uphinde uhlanganyele namakhasimende akho ngokususelwa ekuziphatheni kwangaphambilini nokuncamelayo kweselula. Thuthukisa izinombolo zakho zokuhlenga ngokushintsha okunikezwayo ngenkathi zisemakethe.
Linganisa - thola ukuqonda kumikhankaso yakho ye-wallet yeselula. Linganisa amazinga wokuchofoza, thola ukubonakala kokuqukethwe okulondoloziwe nokususiwe, nokuningi. Sebenzisa le datha ebalulekile ukufakazela i-ROI. Futhi ungahlanganisa isitolo sakho, ukuthengisa kwe-POS nedatha yokuhlenga neCatapult ukuvala iluphu kuzinhlelo zakho zesikhwama semali eselula.
Tags: ikatii-google passisikhwama semali esihlanganisiweiphone idlulaIsikhwama se-iphoneisikhwama seselulaidlidlizakudlidliza ikatiumphathi wesikhwama semali
Ingabe Uyindawo? Ukuphuma? Noma Isibonakaliso Nje?
Isikhathi Sokusebenza: I-Web Web Rich, Mobile and Tablet Prototypes